समाचार - किन नक्कली पुतली मेशिनहरू यति लोकप्रिय छन्?
समाचार - पञ्जा गुडिया मेशिनहरू किन यति लोकप्रिय छन्?
पंजा पुतली मेसिनहरू र सबै प्रकारका भेन्डिंग गिफ्ट मेशिनहरू अब प्रायः सबै ठाउँमा छन्। नक्कली पुतली मेसिन पसलको बाहेक, ती शपिंग मल्लको आखाँमा, सिनेमाघरको छेउमा, बच्चाहरूको कपडा पसल वा रेष्टुरेन्टहरूमा र बुटिक सुपरमार्केटहरूको प्रवेश द्वारमा हुन्छन्।
तिनीहरू कस्तो खालका उपभोक्ता हुन् जसले पंजा नक्कली मेशीनको अनुभव गर्छन्?
तिनीहरू किन नहुने पुतली मेसिन छनौट गर्छन्? कुन कुराले तिनीहरूलाई पैसा फाल्न जारी राख्न तयार गर्दछ?
जस्तो कि हामी सबैलाई थाहा छ, युवती महिला र बच्चाहरू पंजा नौंपा मेशिनको मुख्य उपभोक्ता समूह हुन्। खेलाडीहरूको यी दुई समूह तर्कहीन उपभोक्ता समूहहरूसँग सम्बन्धित छ। यी प्यारा, मनपर्दो गुडाहरूको कारणले गुड़िया मेसिनहरू खेल्न सजिलो छ। थप रूपमा, आधुनिक समाजमा, जीवनको गति द्रुत गतिमा छ, र व्यक्तिको समय खण्डित छ। क्लाउ पुतली मेसिन एक चतुर तरिका हो मान्छेहरूको टुक्रा गरिएको समयलाई कतारमा राख्नु, कारको लागि पर्खनु, इत्यादि प्रयोग गर्नको लागि, ताकि उपभोक्ताहरू समय दूरीमा रमाउन सक्नेछन्। त्यसकारण, दम्पतीहरू, एक परिवार, युवती महिला र अन्य समूहहरू अक्सर पुतलीका मेसिनहरूको मालिक हुन्। यो प्रवृत्तिको साथ राख्न, स्टोरको सजावट बुझ्न, र भित्री भण्डारको सजावट प्रयोग गरी ग्राहकहरूलाई फोटो लिन र फैलाउनको लागि आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण छ र दोस्रो प्रचार बनाउनुहोस्।
जब एक केटा साथी जसले आफ्नो आकर्षण देखाउन चाहान्छ कि उसले आफूले मनपराएकी केटीले पुतलीको मेसिनमा पुतली चाहान्छ कि भनेर देख्छ भने, केटाले आफुलाई पुच्छरमा समात्ने पैसा लगेर लैजान्छ। कारण एकदम सरल छ, केवल उसको पुतलीलाई समात्ने क्षमता देखाउन। पुतली मेसिन भित्रको पुत्रालाई हेरेर, पws्क्तिलाई बिस्तारै सार्नुहोस्, तपाईं पुतलीलाई समात्न सक्नुहुन्न भनेर उल्लेख नगर्नुहोस्। केवल यस उत्कट प्रयासले केटीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्दछ।
यदि आँखा चिम्लिउने सुरुवात हो भने, तब पुतली नै पुतली पञ्जा मेसिनको मूल हो, जुन म विश्वास गर्दछु हामी सबैले बुझेका छौं। एक सुन्दर र ताजा पुतली, मनमोहक हुनुपर्छ, विशेष गरी बच्चाहरू र केटीहरूको लागि। केही प्यारा, वा सुन्दर, वा उत्तम, वा फैशनेबल उपहार, सबैलाई प्राप्त गर्न दिनुहोस्
अवश्य पनि, लोकप्रिय आईपी पनि एक नयाँ विकल्प हो। जस्तो कि हामी सबैलाई थाहा छ, तातो आईपी फ्यानहरूको ठूलो संख्याको अनुसरण गर्दछ। लोकप्रिय आईपी परिधीय उत्पादनहरु को परिचय प्राकृतिक रूप मा अधिक उपभोक्ताहरु लाई आकर्षित गर्नेछ
उपभोक्ताहरूको लागि, पुतली मेसिन खेल्दा प्रत्येक पटक उत्साह र ताजापनको भाव आउँदछ। धेरै युवाहरूले यस खेललाई दबाब जारी गर्ने माध्यमको रूपमा लिन्छन्। पुतलीका लागि उपहारहरूको सुन्दरता उपभोक्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने पहिलो उत्पादकता हो। त्यसकारण, पुतली मेसिनको सामग्री उत्पादनहरू नियमित रूपमा अद्यावधिक हुनु आवश्यक छ। वर्तमानमा मुख्यधाराका उत्पादनहरू सांस्कृतिक र रचनात्मक डेरिभेटिभहरू हुन्, जस्तै प्लस गुडिया। जापानीहरू एउटा रत्न पंजा मशीन, केक पंजा मशीन, र जुत्ता पंजा मेसिनको साथ आएका छन्, जसले प्रयोगकर्ता जनसंख्यालाई थप विस्तार गर्दछ।